IPomapoo - Umhlahlandlela Wokugcina kuMxube Wokudlala Pomeranian Poodle - Izinhlobo
I-Pomapoo eluhlaza iyisiphambano phakathi kwePomeranian neToy Poodle.
Bathandwa kakhulu ngabathandi bezinja abafuna inja yethanga elincane, elinobungane nelithembekile kwesinye isikhathi elihola indlela yokuphila esebenzayo.
Ngenxa yobuncane nobuqili bezinhlobo zombili zabazali; lolu hlobo oluxubekile, ngokwemvelo lunoboya obumnandi futhi luhlangene, lulungele labo abafuna inja encane.
Ngabe ufuna ukuletha ekhaya lolu hlobo oluhle lwezinja?
Uma kunjalo, kunezinto eziningi okufanele wazi futhi uzicabangele ngaphambi kokwenza leso sinqumo (isb. Ubumnene bezinja, ukunakekela uhlobo nokuzuza umfuyi omuhle)!
Isifinyezo Sesizukulwane SePomapoo
Usayizi Amasentimitha angu-8 kuya kwangu-10 ukuphakama
Isisindo 5 kuye ku-15lb
Inhloso Umngane / iLapdog
Ifanele i- Abangashadile, abashadile, imindeni enezingane ezindala
Ukuhluka Kwemibala Amamiksi amnyama, amnyama, amhlophe, ansundu kanye nalawo ma-Tri
Isimo Nobungane, Ukudlala, Ukuhlakanipha, Onothando, Ukuzethemba
Amanye Amagama I-Pooranian, Poopom, Pom-a-Poo
Yini iPomapoo? Imininingwane Yokuzala Inja
Ubuntu bePomapoo nobushushu
Ingabe Benza Izinja Zomndeni Ezinhle?
Ukunakekela Umxube We-Pomeranian Poodle
Umbala wePomapoo, Ukubukeka, Ijazi nokuzilungisa
Le lapdog yomklami ixubene neToy Poodle nePomeranian.
IPomapoo incane ngendlela ekhangayo futhi inengubo epholileyo izuzwe njengefa kubazali bayo bobabili .
Imvamisa benza abangane abakhulu nama-lapdog angcono nakakhulu.
Le nja ibalwa njengohlobo oluxubekile (i-Pomeranian x Poodle Mix) futhi njengama-‘designer-hybrids’ amaningi, awaziwa yinoma yimaphi amaKennel Clubs amakhulu e-US noma e-UK.
Njengazo zombili izinhlobo zomzali, Inhloso enkulu yePomapoo ukuba ngumngane kanye nenja enobungane enobungane .
Futhi ziyashesha kakhulu futhi ziyasebenza ukuze zikwazi ukwenza abangane abakhulu bokuhamba okufishane .
Izinhlobo ezixubekile 'zomklami' njengePomapoo bezilokhu zanda ekuthandeni kule minyaka engamashumi amabili edlule, ngakho-ke akwaziwa ukuthi lolu hlobo oluthile lwaqala nini ukufuywa.
Kodwa-ke, sazi okuningi ngemvelaphi yezinhlobo zabazali:
I- I-Toy Poodle empeleni iyi-poodle encane , ekhethwe ngokukhetha ukuthi ibe ncane kune-average.
Ama-Poodle ahlehlela emuva eminyakeni yama-1400s, futhi angohlobo lwesikhombisa oludume kakhulu olubhaliswe yiAmerican Kennel Club.
Ama-Toy Poodles awahlukanisi ngokwezobuchwepheshe njengohlobo lwawo oluhlukile, kepha empeleni yizinhlobo ezincane zePoodle ejwayelekile.
IPomeranian nayo iyindala endala kakhulu - yaduma ngawo-1800 lapho iNdlovukazi uVictoria iba nesithakazelo kuyo.
Zithandwa kakhulu ngenxa yazo ubuso obuhle nosayizi omncane , noma kunjalo bathambekele ekukhonkotheni.
IPomeranian yinja engama-22 ethandwa kakhulu ebhaliswe yiAmerican Kennel Club.
IPomapoo iyinhlanganisela phakathi kwalezi zinhlobo ezimbili 'eyayenzelwe' ukugcina usayizi omuhle nebhantshi elibabazekayo ukwenza ubuhle i-teddy-bear njenge-pup .
Uma ucabanga ukuthi iPomapoo esekhule ngokugcwele incane, ungamangala ukuthi mincane kanjani njengemidlwane - inganela kalula entendeni yesandla sakho!
Emasontweni ayisishiyagalombili ubudala eyodwa yale midlwane izobe isisindo esingu-1lb nje.
Njengezinja eziningi ezifunwa ngabaklami, injana yePomapoo ngeke ize ishibhile .
Kufanele ulindele ukukhokha phakathi kwe- $ 1,000 kuye ku- $ 1,500 USD ngomunye wale midlwane kusuka kumfuyi onedumela elihle .
Zivame ukuzalwa ngosayizi kadoti ophakathi kwamabili kuya kwayisithupha.
Amaviki ayi-8 0.5 kuya ku-1lb
3 izinyanga 1.5 kuya ku-2lb
Izinyanga eziyi-6 2 kuya ku-3lb
Izinyanga eziyi-12 6-9lb
Imidlwane yePomapoo ifinyelela esigabeni sokuvuthwa ngokocansi cishe ezinyangeni eziyi-6-12 ubudala
AmaPomapoos angakwazi dlala kakhulu futhi uqhume , imvamisa ukujabulela ukudlala nezinye izinja nabangane bazo abangabantu.
Bajwayele ukuba nemvelo enhle kakhulu futhi banamathele kakhulu kubanikazi babo , futhi njengabo bobabili abazali bamane nje benzelwe ukuba izinja zethanga.
Yize izinja eziningi ezincane zikhula 'ne-dog syndrome' (okudala ukuthambekela kokukhonkotha nokuzivikela kakhulu), amaPomapoos aziwa njengabanolaka noma ikakhulukazi indawo.
Izinga lamandla abo lilinganiselwe (funda kabanzi ngezansi kumhlahlandlela wokuzivocavoca) futhi abadingi inani lokuzivocavoca elingavamile.
Bayakujabulela ukuhamba nokudlala isikhathi, futhi bavame ukuzixakekisa ngamathoyizi, kepha bavame ukujabula kakhulu ethangeni lomnikazi wabo!
Ziyizinja ezinobungane futhi ezinothando, zilungele abantu abafuna umngane omuhle kakhulu ogcwele uthando nobuntu.
Ngoba bayinja e-hybrid, kungaba nzima ukusho ngokuqiniseka ukuthi imuphi umzali uPomapoo wakho azofana naye ngokobunjalo babo.
Into eyodwa iqinisekile, bathanda kakhulu futhi balangazelela uthando lomuntu, ikakhulukazi kubanikazi babo!
Bajwayele ukwenza kahle bezungeze ezinye izinja, ikakhulukazi izinja abazijwayele, futhi bayathanda ukudlala.
IPomapoo inothando kakhulu futhi iyadlala, futhi ingafanelana nomndeni onezingane ezindala nezinye izilwane. Azifanele izingane ezincane ezingase zingakuqondi ukuthi zisingathwa kahle kanjani.
Ngenxa yobukhulu bazo obuncane nemvelo entekenteke, lezi zidlwane azizifanele izingane ezincane ezingaziphatha ngokungenangqondo nangaphandle kokunakekelwa.
AmaPomapoos izinja ezincane kakhulu, noma sezikhulile ngokuphelele, ngakho-ke azidingi inani elikhulu lokuzivocavoca nsuku zonke.
Bayakujabulela ukusebenza, ngakho-ke kubalulekile ukuthi badlalwe nabo futhi bathathwe uhambo olufushane nsuku zonke.
Njengezinhlobo eziningi ezincane , zingathatha isikhashana esitimeleni esinamanzi ngenxa yezinye zazo ezincane.
Ukuzilungisa lezi zinja kubalulekile njengoba ziklanyelwe ukuba nezingubo eziminyene impela ezingathambekela ekuchithekeni.
Umhlahlandlela Amakholori angama-40 nge-lb ngayinye
Kubalulekile ukuthi ungakondli ukudla kwakho okumanzi kwePomapoo, ngoba bathambekele ekukhuluphaleni nasekuzakheleni ngoqwembe.
Ukuzipha ukudla okumanzi kungaholela ezindabeni zesisindo nasekulahlekelweni ngamazinyo ngaphambi kwesikhathi.
Kubalulekile futhi ukuthi ulandele imiyalo yokuncoma yokuncoma nge-kibble (isb.ukudla okomile), njengoba ufuna ukugwema ukondla inja yakho.
Lapho wondla iPomapoo yakho, kufanele uhlose 'ukudla' kabili ngosuku, usakaze amakhalori abo ansuku zonke ngale ndlela, ngokondla uhhafu wenkomishi ekuseni, bese uhhafu wendebe kusihlwa.
Ungayondla nenja yakho inani elincane lemifino ukuze wandise ukudla kwayo kwe-fiber, kepha kufanele ugweme ukuyinika u-anyanisi, ugalikhi noma amakhowe njengoba lokhu kungaba yingozi kakhulu ezinjeni.
IToyi Poodle (efanekiselwe ngenhla) ingumzali wesizukulwane sokuqala sePomeranian Poodle Mix.
Amaminithi 20-30 imizuzu
Yize beyinja encane yezinja, bayakujabulela ukuba ngaphandle futhi banganikezwa isikhathi esigadwe kakhulu se-leash uma indawo yangakini ikuvumela.
Azidingeki kakhulu uma kukhulunywa ngokuzivocavoca umzimba, ngakho-ke zinguhlobo olukhulu lwalabo abahlala emafulethini noma mhlawumbe abakwazi ukuthatha uhambo olude.
Kufanele uhlose ukuthatha inja yakho ohambweni olulodwa noma ezimbili ezisheshayo ngosuku, isilinganiso semizuzu engama-20-30 nsuku zonke.
AmaPomapoo, uma ethulwa ngokuphepha emanzini futhi egadiwe, angavunyelwa ukubhukuda uma ekhombisa ukuwathanda. Kodwa-ke, abanikazi abaningi bathola ukuthi inja yabo ingase ikhethe ukugoqeka emathangeni abo kunokuba ifune amachibi echibini!
Lezi zinja zihlakaniphe kakhulu, futhi kuyalulekwa lokho uqala ukuziqeqesha lapho nje sebekhule ngokwanele ukuthi bangaletha ekhaya; lokhu kwenzelwa ukuthi bangabi nenkani kakhulu.
Ngenxa yobungqabavu babo, uzodinga ukubabhekisisa lapho beqeqeshwa.
Ngenxa yomzali wabo wePoodle, amaPomapoos ngokuvamile athanda ukufunda ngakho-ke kulula kakhulu futhi aphendula kahle ekuqeqeshweni okungaguquguquki, esebenzisa ukuphatha okuncane nokuqiniswa okuhle.
Uma kunokwenzeka, khetha indawo engaguquguquki engaphandle yekhefu lokugezela. Inkumbulo enhle eliyizuze ohlangothini lwayo lwePoodle lizoqinisekisa ukuthi lihlobanisa lesi sikhala namanzi, futhi lizobadikibalisa ezingozini zendlu.
Ukukhuthaza inja yakho ukuba ibe seduze nezinye izinja kusukela isencane kakhulu umqondo omuhle ukugwema ukuthambekela okunolaka.
Ungakufezekisa lokhu ngokuya emapaki ezinja zomphakathi noma ngezikhathi zokuqeqeshwa kweqembu.
Dlala imidlalo ekhuthaza inkumbulo nokukhohlisa ukufunda.
‘Umdlalo wegama’ - okubandakanya ukuqamba ngalinye lamathoyizi abo - kubavumela ukuthi bafunde imiyalo ngazinye, ngaso sonke isikhathi uma usho igama lethoyizi ingane yakho kufanele ilicoshe ithoyizi okukhulunywa ngalo.
Ngoba iPomapoo akuyona inja emsulwa, ingozi yokuba nezifo zofuzo nezinkinga ezinkulu incane impela .
Kodwa-ke, basathambekele kwezinye izimo zezempilo:
Unganciphisa ubungozi bezinkinga ezengeziwe zezempilo ngokuhlolwa kwe-vet ejwayelekile futhi usebenze ngempilo yenja yakho ngokudla okunempilo, indlela yokuphila nokuzivocavoca umzimba.
IPomapoo nayo ithambekele kwabanye ‘ izinyembezi ’Ezungeze indawo yamehlo, lokho kungenxa yemfihlo yabo eyeqile ngokweqile.
Isilinganiso sokuphila esiphakathi sePomapoo sineminyaka eyi-12 kuya kwengu-14 ubudala, lokhu ngokwesilinganiso sezinja ezincane, njengoba zivame ukuhlala isikhathi eside kunezinhlobo ezinkulu.
Usayizi omaphakathi wale nja esikhule ngokugcwele ingu-8-10 amayintshi ngesisindo esiphakathi kuka-5-15lb (kuya ngosayizi wezinhlobo zabazali).
Ijazi lazo ubude obumaphakathi, lincane kakhulu futhi liyajiya - ngenxa yamajazi ezinhlobo zabazali bazo.
Ijazi lePomapoo kungaba yibhantshi elilodwa, njengokuxubana okuningi kwePoodle , noma ijazi elimbili (njengePomeranian).
AmaPomeranian anengubo ethambile ephindwe kabili ngokungafani namaPoodle anengubo ejiyile egobile. Amajazi abo angavela ngemibala ehlukahlukene:
Imvamisa yeshedi iphansi kuya kokuphakathi, futhi izodinga ukugunda izinwele njalo ezinyangeni ezingu-2-3 .
Kufanele uhlose ukuxubha ingubo yenja yakho kathathu kuya kahlanu ngesonto.
Lezi zinja zinamajazi aminyene kakhulu angahle athambekele ekumataniseni nasekuphambaniseni.
Ukuxubha njalo kuwumqondo omuhle ukugcina ijazi labo licwebezela, libukeka futhi liphilile.
IPomeranian enye ingxenye yale nja eyi-hybrid.
IPomapoo ingabonakala kalula ngosayizi wayo omncane kanye nemvelo yabo ethandekayo ye-teddy-bear.
Ubuntu babo obunothando nemvelo enothando ibenza babe ngabalungele labo abafuna umngane omncane.
Yize zingazifanele izingane ezincane, zingalungela imindeni emincane enezintsha noma imibhangqwana efuna isilwane.
Ngemizuzu engu-30 enconyiwe yokuzivocavoca nsuku zonke nokuzilungisa njalo, lezi zinqwaba zamandla angaba umngane ophelele.
Qiniseka ukuthi ubondla kahle futhi ubazise ekuqeqeshweni kusenesikhathi ukugwema noma yiziphi izinkinga noma ukukhathazeka ngempilo njengoba umdlwane wakho ukhula ube yinja evuthiwe.
Uma ungumnikazi walezi zinja ezihlanganisiwe, noma uletha eyodwa emndenini wakho, qiniseka ukusazisa emazwaneni!
Lemon Beagle Dog Breed Information, Izithombe namaqiniso
isikhathi sokuphila se-maltese shih tzu
amagama asho impisi yenyanga
umalusi waseJalimane omnyama nomhlophe
i-germanel wolf mix imidlwane